Safal Khabar - तीन घण्टाकै बिचमा माधव नेपालले किन भेटे ओलीलाई पटक–पटक ?
तीन घण्टाकै बिचमा माधव नेपालले किन भेटे ओलीलाई पटक–पटक ?
बुधबार, १४ फागुन २०७६, ०८ : ४९
काठमाडौं । नेकपाभित्र कुन बेला कस्तो समिकरण बन्छ ? अहिले कसैलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली गत पुस २३ यता पार्टीभित्रै कमजोर बनेपछि उनले पार्टीका पूर्व एमाले नेताहरुलाई फकाउने, गलाउने र तर्साउने तिनै थरी निति अवलम्बन गर्न खोजिरहेका छन् ।
सकभर गलाउने, नभए फकाउने र त्यसो पनि हुन नसके तर्साउने नीतिमा प्रधानमन्त्री ओली देखिएका छन् । सभामुख चयन प्रक्रिया, एमसीसी सम्झौता देखि अहिले संविधान संसोधन कार्यदल निर्माण सम्ममा उनी पार्टीमा ‘भोटिङ’ मा नगएपनि अल्पमतमा छन भन्दा हुन्छ ।
प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा (बादल) सम्म एकातिर मिल्दा सचिवालयमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा छन् । उनलाई सचिवालय सदस्य इश्वर पाखेरेलको मात्र साथ देखिन्छ । महासचिव विष्णु पौडेल पनि कतिपय विषयमा मौनता साधिरहेको छन् ।
यही बिच ओलीलाई पूर्व एमाले समुहलाई मिलाएर अगाडी बढ्न तत्कालिन एमाले पङक्तिका कतिपय नेताहरुले दबाब बढाईरहेका छन् । ओलीले पनि त्यही रणनीति अनुसार सकभर पूर्व एमालेका नेताहरुलाई मिलाउन कोसिस गरिरहेका छन् । उनले खासगरी वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई आफुसँगै मिलाउन निक्कै कोसिस गर्न थालेका छन् ।
त्यही क्रममा उनले मंगलवार (हिजो) मात्रै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई तीन घण्टा को बीचमा दुई पटक भेट गरेका छन् । दिँउसो ३ बजे बालुवाटारमा ओलीको निम्तोमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेपाल पुगेका थिए । त्यहाँ उनले झण्डै पौने घण्टा नेपालले छलफल गरेका थिए ।
तर दुई नेताका बीचमा मात्र भएका छलफलका विषय के थिए भन्ने विषयमा दुवै नेताका सचिवालय मौन बसेका छन् । त्यसपछि बाहिरिएका नेपाल सिधै प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे । त्यहँ उनले पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता खनाल र उपाध्यक्ष वामदेवसँग केही समय छलफल गरे । प्रचण्ड निवासमा छलफलमा रहदै गर्दा नेपाललाई फेरि बालुवाटाराबाटै फोन आयो । उनलाई फेरि छलफलका लागि भन्दै बालुवाटार बोलाइयो । उनी साँझ ६ वजे फेरि बालुवाटार पुगे ।
बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार त्यसपछि भने नेपालले ओलीसँग झण्डै दुई घण्टा छलफल गरे । उनी साँझ ८ बजे मात्र त्यसपछि बालुवाटारवाट बाहिरिएका थिए । नेकपाको आज बिहान सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । सचिवालय बैठकले वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा जाने नजाने विषय देखि संविधान संसोधन र एमसीसी सम्झौता सम्मका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने कार्यसूचि छ ।
यस्तो जटिल विषयहरुमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाईएको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले नेपाललाई तीन घण्टाको बीचमा किन पटक पटक भेट गरे भन्ने विषय अहिले नेकपा नेताहरुका बीचमा चर्चा छ ।
दुवै नेता र नेताका सचिवालयले पनि भेटको पुष्टि गरेपनि त्यसक्रममा भएका छलफलका विषय सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले पनि दुई नेताका बीचको छलफल रहस्यको विषय छ । सचिवालयमा आज देखिने नेताहरुका अभिब्यक्ति र लिइने निर्णयले नेकपाभित्र ओली नेपाल बीचको मंगलवारको पटक पटकको छलफलका विषय खुल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
#नेकपा #केपी ओली #माधव नेपाल
अल्पमतमा परेपछि यतिसम्म रहेछ प्रधानमन्त्री ओलीको भित्री प्लान् ?
उनको कार्यशैलीगत समस्याको पटक पटक कुरा उठ्न थालेपछि पार्टीभित्रै नेताहरुका बीचमा धुव्रिकरण हुन थालेको छ...
माधव नेपाललाई अझै फकाउँदै ओली पक्ष
नेपाल स्यवंले आफुप्रति पार्टीका नेताहरु केपी ओली...
नेकपा बैठकमा यसपटक सरकारको आलोचना कम हुने
गत वर्षको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी...
बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्न सकिन्छ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वामदेव गौतमले...